Nezvedu - ZHEJIANG LEMA Magetsi CO., LTD
Zhejiang Lema Magetsi Co, Ltd.iri Wenzhou City, Zhejiang Province. Iyo kambani yakavambwa muna 1986.
Lema anozvipira kuR & D, kugadzirwa uye kutengesa kweanodzora maindasitiri emagetsi switch. Zvigadzirwa zvemakambani zvinosanganisira micro switch uye kufamba (muganho)Chinja, pushira bhatani switch, tsoka switch, switch switch, zadzisa muchengeti, AC magetsi socket.
Mushure memakore angangoita makumi matatu ekuvandudza kwakadzikama, Lema ave hombe dhizaini dhizaini yekugadzira michina muChina. Iyo kambani parizvino inovhara nzvimbo inopfuura 11,000 mativi emamita.
Tarisa pane kukura, kugadzirwa uye kuenderera kuvandudza kwemhando yepamusoro kudzora switch zvigadzirwa!
Gamuchira izvo zvakakosha zvevatengi kuti vagadzirise kusangana nezvinodiwa zvekushandisa zvakakosha!
Natsiridza chigadzirwa kudhura kuita uye chengetedza mutengo wevatengi!
Iine nyanzvi yekugadzira uye timu yeR & D, zvigadzirwa zvinogona kuve zvinoenderana maererano nezvinodiwa nevatengi.
Gadzira hunyanzvi hwekugadzira tekinoroji uye nekuzvimiririra kutsvagisa uye kugadzira zvigadzirwa zvekugadzira
Yese yekutsika uye jekiseni kuumbwa zvikamu zvakagadzirwa zvakasununguka uye zvinogadzirwa, izvo zvinonyatso kuvimbisa chigadzirwa chemhando uye yekugadzira kutenderera.
Kubudikidza nekuchengetwa kwemidziyo mbishi, kugadziriswa kwezvikamu uye kupedzisa chigadzirwa chechigadzirwa, yakawanda-nhanho yemhando yekudzora inoitwa, uye chigadzirwa kuendesa kuongororwa ndeye 100% yakazara yekutarisa kuverengera mhando yezvinhu zvakaunzwa.
Iine nyanzvi yerabhoritari, chigadzirwa chigadzirwa chinogona kuyedzwa zvinoenderana nezvinodiwa zvinodiwa.
Zvigadzirwa zvepakati zvakawana CCC, UL, VDE, CE uye zvimwe zvitupa, uye zvinoenderana neRohs zviyero.
Toggle Chinja, Micro Push Bhatani Micro Chinja Hapana Nc Pamwechete, Pushira Bhatani Footswitch, Magetsi Toggle Chinja, Shandura Shandura Bhoot, Push Button Micro Chinja,